Olee otú Nchebe Weebụ si emetụta SEO | Martech Zone
You maara na ihe dị ka 93% nke ndị ọrụ na-amalite ahụmịhe ntanetị ha na-eme weebụ site na iji kọmputa ede ajụjụ ha n'ime igwe nyocha? Onu ogugu a aghaghi iju gi anya.
Dị ka ndị ọrụ ịntanetị, anyị na-agba nkịtị ka mma nke ịchọta kpọmkwem ihe anyị chọrọ n'ime sekọnd site na Google. Ma anyị na-achọ ụlọ ahịa Pizza mepere emepe nke dị nso, nkuzi banyere otu esi ejikọta, ma ọ bụ ebe kachasị mma iji zụta ngalaba aha, anyị na-atụ anya na afọ ojuju na azịza dị mma nke ga-emeju ebumnuche ọchụchọ anyị.
Uru ọnụọgụ okporo ụzọ etinyela njikarịcha njin elekwasị anya, ebe ọ bụ isi nkuku nke iwulite ihu ọma n'ịntanetị. Google ugbu a na-eme site na Ijeri 3.5 na-achọ kwa ụbọchị na ndị ọrụ na-ahụ SERP ya (peeji nsonaazụ njin ọchụchọ) dị ka ihe atụ kwesịrị ntụkwasị obi nke mkpa weebụsaịtị.
Abia n’ihe omume SEO di nma, anyi nile maara ihe ndi ozo. Akwadoro savvy na usoro ojiji nke Keywords ka akwadoro, yana ichota mkpado ALT, na-abia na nkowa meta kwesiri ekwesi, ma tinye uche na imeputa ihe mbu, nke bara uru, na nke bara uru. Njikọ ụlọ njikọ na njikọta bụ akụkụ nke mgbaghoju anya, yana ịgbanye ụzọ dị iche iche na-esi enweta okporo ụzọ na iji usoro nkesa ọdịnaya dị ukwuu.
Ma gịnị banyere nchebe weebụ? Kedu ka o si emetụta mgbalị SEO gị? Google bụ maka ịme ịntanetị ka ọ bụrụ ebe nchekwa na ebe na-atọ ụtọ karị, yabụ ịnwere ike ịkwado nchedo weebụ gị.
SSL abụghị ihe nchekwa tinyere, mana ọ dị mkpa
Google na-akwado weebụ echedoro anya ma na-atụ aro weebụsaịtị kwesịrị ịkwaga na HTTPS site n'inweta asambodo SSL. Isi ihe kpatara ya dị mfe: data na-ezoro ezo na-agafe, na-egbochi ojiji ọ bụla nke nzuzo na ozi dị nro.
Mkparịta ụka HTTP vs. HTTPS na ọnọdụ nke SEO gbara ọkụ na 2014 mgbe Google kwupụtara ọkwa echekwara echekwa nwere ike ịnweta ogo ogo ogo. N'afọ sochirinụ, ọ bịara doo anya na akara ngosi a na-ebuwanye ibu karị. N'oge ahụ, Google kwuru na ịnwe akwụkwọ SSL nwere ike inye saịtị asọmpi uru ma jee ozi dị ka tiebreaker n'etiti weebụsaịtị abụọ dị, otu ma ọ bụ obere, otu ogo.
Nnukwu mmekorita ọmụmụ nke Brian Dean duziri, Semrush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, na ClickStream, nyochara nsonaazụ ọchụchọ Google otu nde wee chọpụta njikọ siri ike dị n'etiti saịtị HTTPS na peeji nke mbụ. Ọ baghị uru ikwu, nke a apụtaghị na ịnweta akwụkwọ SSL na-akpaghị aka na-enye gị ọnọdụ ka mma, ọ bụghịkwa akara ọkwa kachasị mkpa algorithm na-adabere.
Google ebipụtakwala a atụmatụ atọ gaa na ntanetị na-enweghị nchebe ma kwupụta mwepụta nke Chrome 68 mmelite maka July 2018, nke ga-akara niile Http nrụọrụ weebụ dị ka enweghị nchebe n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu. Ọ bụ nkwuwa okwu, mana usoro ezi uche dị na ya, nke ga-eme ka okporo ụzọ echedoro gafee ụwa niile, maka ndị ọrụ niile, belụsọ.
A na-atụ anya ka weebụsaịtị HTTPS bụrụ ndabara, mana ọtụtụ ndị webmasters ka na-eju anya esi nweta SSL akwụkwọ na ihe kpatara nke a ji dị nnukwu mkpa. ndị a bụ uru ole na ole a na-apụghị ịgbagha agbagha, ma SEO na ijide akara ngosi dị mma:
A na-atụ anya nkwalite ọkwa maka weebụsaịtị HTTPS
Emechara ọkwa kachasị nke nchekwa na nzuzo
Weebụsaịtị na-ebu ngwa ngwa
Ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa gị nwere ntụkwasị obi karịa ma na-ewulite ntụkwasị obi (dika Nnyocha HubSpot, 82% nke ndị zaghachiri kwuru na ha ga-ahapụ saịtị ahụ nke echekwaghị)
A na-echekwa data niile dị nro (dịka ozi kaadị akwụmụgwọ)
N’oge na-adịghị anya, yana HTTPS, izi ezi, izizi data, na ihe nzuzo na-echekwa. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ HTTPS, ọ na-abụ ezigbo ihe kpatara Google iji kwụghachi gị ụgwọ dị ka onye na-atụnye ụtụ na nchekwa weebụ dum.
Enwere ike ịzụta asambodo SSL, mana enwerekwa atumatu maka websaịtị echebere nzuzo nke na-enye nkwenye ọhụụ nke oge a n'efu, dị ka Ka anyị zoo. Naanị buru n'uche na asambodo nke ikike ikike ikike akwụkwọ a na-adịgide maka ụbọchị 90 wee megharịa. Enwere nhọrọ nke akpaaka nke mmeghari ohuru, nke bu ihe ozo.
Zere aghọ Ndị A Na-egwu Okirikiri
Cybercrimes aghọwo: ha adịwanye iche, nwekwuo ọkaibe, ma sie ike ịchọpụta, nke nwere ike imerụ azụmahịa gị n'ọtụtụ ọkwa. N'okwu kachasị njọ, a manyere ụlọ ọrụ ka ha kwụsị ọrụ azụmaahịa ha ruo mgbe a ga - ahazi ntụpọ nchekwa webụsaịtị, nke nwere ike ịkpata ego furu efu, belata ọkwa, yana Google ntaramahụhụ.
Dị ka a ga - asị na ịlụ ndị omekome wakporo gị abụghị nrụgide.
Ugbu a, ka anyị tụlee usoro aghụghọ na mwakpo ndị na-ewu ewu na ụzọ ha nwere ike isi mebie mbọ SEO gị.
● Nguzobe Weebụ na Ihe Nlekọta Server
Nkwupụta weebụsaịtị bụ ọgụ na ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe ọdịdị ọdịdị nke saịtị ahụ. Ha bụ ọrụ nke defacers, ndị na-abanye n'ime sava weebụ ma dochie ebe nrụọrụ weebụ a kwadoro na otu nke ha ma ha na-eme otu n'ime isi okwu mgbe ọ bịara na nchekwa ntanetị. N'ọtụtụ oge, ndị na-agba ọsọ na-eji uru nke ihe nkesa eme ihe ma nweta ohere nchịkwa site na iji ihe Ọgwụ SQL (usoro ntinye koodu). Commonzọ ọzọ a na-ahụkarị na-abịa n'iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi file transfer protocol (nke a na-eji maka ịnyefe faịlụ n'etiti ihe nkesa na onye ahịa na netwọk kọmputa) maka inweta ozi dị nro (nkọwa nbanye) nke ejiri dochie ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a na nke ọzọ.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-ekwu na enwere ma ọ dịkarịa ala 50.000 ihe ịga nke ọma na ebe nrụọrụ weebụ na 2017, na n'ọtụtụ oge - anyị na-ekwu maka nkwupute uka nke weebụsaịtị. Mwakpo ndị a hacker nwere otu ihe mgbaru ọsọ: ha ga-emebi aha ụlọ ọrụ gị ma mebie aha gị. Mgbe ụfọdụ, mgbanwe ndị emere adịghị mma (dịka ndị na-agba ọsọ gbanwere ọnụahịa nke ngwaahịa na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị), oge ndị ọzọ - ha na-ebugo ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị ma mee mgbanwe siri ike nke siri ike ịhapụ.
Enweghị ntaramahụhụ SEO ọ bụla maka nkwuputa weebụsaịtị, mana ụzọ weebụsaịtị gị gosipụtara na SERP ga-agbanwe. Mmebi ikpeazụ a dabere na mgbanwe ndị emere, mana ọ ga-abụ na weebụsaịtị gị agaghị adị mkpa maka ajụjụ ndị ọ na-emebu, nke ga-eme ka ogo gị daa.
Thedị mwakpo kachasị njọ nke hacking na-echekwa sava na dum, nke nwere ike iduga npụta dị egwu. Site na ịnweta isi nkesa (ntụgharị "mastermind computer"), ha nwere ike ọ dị mfe iji ya ma jikwaa ọtụtụ weebụsaịtị nke akwadoro ebe ahụ.
Ndị a bụ ụzọ ụfọdụ iji gbochie ịda dị ka aja ebe a:
Họrọ maka firewall web ngwa a pụrụ ịdabere na ya (WAF) - ọ na-emetụta usoro iwu nke na-ekpuchi mwakpo ndị a na-ahụkarị dịka ịdefe saịtị na ntinye SQL, n'ụzọ ahụ na-echebe sava
Debe sọftụwia CMS gị nke oge - CMS na-anọchite anya sistemụ njikwa ọdịnaya, nke bụ ngwa kọmputa nke na-akwado okike na mgbanwe nke ọdịnaya dijitalụ na ọ na-akwado ọtụtụ ndị ọrụ na gburugburu mmekorita.
Ibudata ma jiri naanị plugins na isiokwu (ntụkwasị obi na ndekọ WordPress, zere nbudata isiokwu n'efu, budata ọnụọgụ na nyocha wdg.)
Họrọ nchebe dị mma ma chebe nchekwa nke agbata obi IP
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe nkesa gị, belata adịghị ike site na igbochi ịnweta ihe nkesa
O di nwute, enweghi nchebe 100% na cyberspace, ma site na nchebe di elu - i nwere ike belata ohere nke agha nke oma.
● Malware Nkesa
Nkesa malware di na mgbe obula na agha cyber. Dị ka onye ọrụ ahụ si kwuo akụkọ site na Kaspersky Lab, ngụkọta nke 29.4% nke kọmputa ndị ọrụ tara ahụhụ ma ọ dịkarịa ala otu mwakpo malware na 2017.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-agba ọsọ na-eji usoro nke spoofing ma ọ bụ phishing igosi onwe ha dika ndi kwesiri ntukwasi obi. Ọ bụrụ na onye ahụ dakwasịrị ya wee budata ngwanrọ ọjọọ, ma ọ bụ pịa na njikọ nke wepụtara nje ahụ, kọmputa ha na-ebute ọrịa ahụ. N'ọnọdụ kachasị njọ, weebụsaịtị nwere ike mechie kpamkpam: hacker nwere ike iji njikwa na-achịkwa iji banye na kọmputa onye ahụ.
Ọ dabara nke ọma na nchekwa weebụ zuru oke, Google anaghị egbusi oge ọ bụla ma na-eme ngwa ngwa iji weghachite weebụsaịtị niile dị oke egwu ma ọ bụ ikpe mara maka ikesa malware.
O di nwute na gi dika onye ojoo, n’agbanyeghi na obughi nsogbu gi - webusaiti gi ka akuko dika spam rue mgbe amara ya, ikwe ka oganihu SEO gi nile gha ala.
Ọ bụrụ na ị na-, chineke machibidoro, ka o mere ka Google mata gị n'ime Search Console banyere phishing, achọghị software, ma ọ bụ hacking, ị kwesịrị ị na-eme ozugbo.
Ọ bụ ọrụ gị, dị ka webmaster, iji kpoo saịtị ahụ, chọpụta mmebi ahụ, chọpụta nsogbu ndị ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị ka adịghị mma, ọ dịịrị gị ime ka ọ dị ọcha na rịọ maka nyocha weebụsaịtị site na Google.
Cheta, Google dị mgbe niile n'akụkụ ndị ọrụ yana nchekwa ha. Jide n'aka, a ga-enye gị nkwado zuru oke iji dozie ihe.
Ọ bụ ihe amamihe dị na-imelite mmemme antivirus gị na-aga n'ihu ma na-enyocha kwa oge, jiri ohere nhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ iji chekwaa akaụntụ ịntanetị gị nke ọma, ma nyochaa ahụike nke saịtị gị nke ọma.
Bara Uru weebụsaịtị Security Atụmatụ
Ọtụtụ mgbe, anyị kwenyere na ohere anyị nwere ịbụ ndị mpụ cyber na-adịkarịghị oke. Eziokwu bu, o nwere ike ime onye ọ bụla. Kwesighi ịme azụmahịa bara ọgaranya ma ọ bụ nọrọ na gọọmentị iji bụrụ onye ị ga-achọ. Na mgbakwunye na ihe gbasara ego ma ọ bụ nkwenkwe nke onwe ha, ndị na-agba ọsọ na-awakpo saịtị na-atọ ọchị, ma ọ bụ iji mụta ihe ha.
Emela ka emehie ihe banyere nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Ma ọ bụghị ya - ma mgbalị SEO gị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị ga-abụ obere nsogbu gị. Na mgbakwunye na ihe anyị kwurula na ngalaba gara aga gbasara omume akwadoro maka ịzere nkwarụ webụsaịtị, ịba mba, phishing, na ọrịa malware, nwere ndụmọdụ ndị a n'uche:
N'ụzọ doro anya, ịmepụta okwuntughe siri ike nke na-agaghị ekwe omume imebi emebi (soro Ndụmọdụ Google maka okwuntughe echedoro)
Idozi oghere nche ọ bụla (dịka nlekota na-adịghị mma nke ịnweta nchịkwa, ọnya data nwere ike, wdg)
Jide n'aka na ịdebanye aha ngalaba gị na onye na-edeba aha a pụrụ ịdabere na ya ma zụta nnabata web nwere nchebe
Chegharia onye nwere ike ịnweta usoro mbufe faịlụ gị na nchekwa data
Jide n'aka na ị kwadoro ebe nrụọrụ weebụ gị ma wepụta atụmatụ mgbake ma ọ bụrụ na ị banye na ya
Nke a bụ nanị ọnụ mmiri kpụkọrọ akpụkọ. Nke bụ eziokwu bụ na ịnweghị ike ịkpachara anya - nara ya onye na-etinye aka na ụlọ ọrụ weebụ.
Obi abụọ adịghị ya, ịkwalite ọnụnọ gị n'ịntanetị dị mkpa dị ka ndị na-azụ ahịa na-adabere na Google maka ịnweta ozi ngwa ngwa banyere azụmaahịa gị na ngwaahịa / ọrụ ị na-enye, mana ha na-ejikwa ya iji nyochaa site na nhọrọ ha ma chọpụta ihe kacha mma maka ha. Ọ bụrụ n’iburu n’uche ndụmọdụ ndị a ekwuru n’elu wee gbanwee gaa na HTTPS, ma tinyekwa ego na okpu ọcha SEO, ị nwere ike ịtụ anya iji nwayọ nwayọ gbagoo SERP.
Nchebe weebụ ga-abụrịrị ihe kachasị mkpa gị, ọ bụghị naanị n'ihi ị nweta uru SEO.
Ọ dị oke mkpa maka ahụmịhe sọfụfụ nke onye ọrụ ọ bụla, yana maka azụmaahịa ịntanetị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ na-ebelata ohere nke ịgbasa na nkesa nke malware na nje virus na stampụ ọpụpụ ndị omempụ ọjọọ ndị ọzọ na-agụnye izu ohi ma ọ bụ mmemme hacking. Enweghị ụlọ ọrụ na-enweghị nsogbu, yabụ n'agbanyeghị agbanyeghị uche nke azụmahịa gị, ị kwesịrị ịnwale ike gị iji debe nchekwa nchekwa weebụsaịtị kachasị wee wulite ntụkwasị obi na ndị ahịa gị na ndị ahịa gị. N'ezie, dị ka onye nlekọta webmaster - ị nwere ibu ọrụ ịme ya.
Tags: cybercrimeazunyocha googlehttphttpsUchechukwuhapụ encryptokwuntughesearch engine njikarịchaechekwa okwuntughesecurityAspoofingogwu ogbugba sqlnyochaa weebụsaịtị